धरानमा १० वर्षीय बालकलाई कोरोना- प्रदेश १ - कान्तिपुर समाचार
श्रावण २३, २०७७ प्रदीप मेन्याङ्बो
सुनसरी — धरानमा शुक्रबार १० वर्षीय बालकमा कोरोना पुष्टि भएपछि उनको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ तीव्र पारिएको छ । ती बालकसँगै उनकी आमा र हजुरआमालाई ज्वरो आएपछि बुधबार स्वाब संकलन गरिएको थियो ।
धरान–१५ बाझगरास्थित दशरथ पथमा डेरामा बस्ने ती बालककी आमा धरान उपमहानगरपालिकाकी कर्मचारी हुन् । उपमहानगरका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख उमेश मेहताका अनुसार आमा र हजुरआमाको रिपोर्ट आउन बाँकी छ । बालकसँग सम्पर्कमा रहेका १७ जनाको ट्रेसिङ भएको उनले बताए ।
‘ती बालकलाई कसरी संक्रमण भयो भन्ने पहिचान हुन सकेको छैन । उनको सम्पर्कमा आएकाहरूको शनिबार स्वाब संकलन गर्नेछौं । शनिबारै वडा १५ मा कार्यरत कर्मचारी र अन्य जोखिममा रहेकासमेत गरी ७० जनाको स्वाब संकलन गरिनेछ,’ उनले भने । संक्रमित बालकका बाबु धरानको एक हार्डवेयर पसलका ट्र्याक्टर चालक हुन् ।
प्रकाशित : श्रावण २३, २०७७ १३:३२
श्रावण २३, २०७७ राजबहादुर शाही
मुगु — डा. गोविन्द केसी मुगु जिल्ला अस्पताल ठिनी पुगेर बिहीबारदेखि बिरामीको निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच गरिरहेका छन् । उनी जुम्लाको खलंगा बजारबाट हिँडेरै मुगु आइपुगेका हुन् ।
केसीले विशेष गरी हाडजोर्नीसम्बन्धी समस्या भएका बिरामीलाई लक्षित गरी सेवा दिएका छन् । केसीसँग स्वास्थ्य जाँच गर्न विभिन्न स्थानबाट मानिसहरू पुगेका छन् ।
‘मलाई घुँडा दुख्ने समस्या थियो, त्यही डा. केसीसँग जाँच गराउन आएँ,’ श्रीनगर गाउँका मोहनकुमार मल्लले भने, ‘हड्डी फ्याक्चर भएको रहेछ ।’
अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरूले पनि केसीसँग हाडजोर्नी उपचारसम्बन्धमा सल्लाह–सुझाव लिएका थिए । डा. केसी आउने खबर पाएपछि हड्डीसम्बन्धी भएकालाई लक्षित गरी सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख निर्मल नगरकोटीले बताए । उनका अनुसार केसीले बिहीबार ४७ जना बिरामीको निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गरेका छन् । केसीले मुगु अस्पतालमै बसेर करिब तीन दिन सेवा दिनेछन् ।
यसअघि उनले हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिका पुगेर करिब डेढ सय स्थानीयको स्वास्थ्य परीक्षण गरेका थिए । अदानचुलीबाट फेरि बाजुरा, कालिकोट, जुम्ला पुगेर सेवा दिएका थिए । जुम्लाबाट दुई दिन हिँडेर डोल्पाको जगदुल्ला गाउँपालिका पुगेका उनी त्यहाँ शिविर गर्न नपाएपछि चार दिन हिँडेर मुगु आइपुगेका हुन् ।
प्रकाशित : श्रावण २३, २०७७ १२:५२